1 Mwari, uyo akataura kare kare panguva zhinji+ uye nenzira zhinji nemadzitateguru edu achishandisa vaprofita,+ 2 akataura nesu pakuguma kwemazuva ano+ achishandisa Mwanakomana,+ waakagadza kuti ave mugari wenhaka yezvinhu zvose,+ uye uyo waakashandisa kuita+ mamiriro ezvinhu epanguva yacho. 3 Iye ndiye kuratidzwa kwokubwinya kwaMwari+ nomufananidzo wake chaiwo,+ uye iye anotsigira zvinhu zvose neshoko rake rine simba;+ uye pashure pokunge anatsa zvivi+ zvedu akagara kuruoko rworudyi+ rwaChangamire munzvimbo dzakakwirira.+ 4 Naizvozvo ava kupfuura ngirozi,+ zvaakagara nhaka zita+ rakanaka kwazvo kupfuura mazita adzo. 5 Somuenzaniso, pangirozi dzose ndeipi yaakamboti kwairi: “Ndiwe mwanakomana wangu; ini, nhasi, ndava baba vako”?+ Uyezve: “Ini ndichava baba vake, uye iye achava mwanakomana wangu”?+ 6 Asi paanounzazve Dangwe+ rake panyika inogarwa, iye anoti: “Ngirozi dzose dzaMwari+ ngadzimupfugamire.”+ 7 Uyewo, kana achitaura nezvengirozi anoti: “Anoita kuti ngirozi dzake dzive midzimu, uye anoita kuti vashumiri vake vanoshandira vanhu vose vave murazvo womoto.”+ 8 Asi kana achitaura nezvoMwanakomana anoti: “Mwari ndiye chigaro chako choumambo nokusingaperi-peri,+ uye tsvimbo youmambo+ hwako itsvimbo yokururama.+ 9 Iwe wakada kururama, ukavenga kusateerera mutemo. Ndokusaka Mwari, iye Mwari wako, akakuzodza+ nemafuta okupembera nomufaro kupfuura vamwe vako.”+ 10 Uye: “Imi, haiwa Ishe, makavaka nheyo dzenyika pakutanga, uye matenga mabasa emaoko enyu.+ 11 Izvo zvichaparara, asi imi mucharamba muripo nguva dzose; izvo zvose zvichasakara senguo yokunze,+ 12 muchazvipeta sezvinoitwa jasi,+ sezvinoitwa nguo yokunze; zvichachinjwa, asi imi munoramba makadaro, uye makore enyu haazomboperi.”+ 13 Asi pangirozi dzose ndeipi yaakamboti kwairi: “Gara kuruoko rwangu rworudyi, kusvikira ndaita kuti vavengi vako vave sechitsiko chetsoka dzako”?+ 14 Dzose hadzisi midzimu+ yebasa rinoitirwa vanhu vose,+ yakatumwa kuzoshumira vaya vachagara nhaka+ yoruponeso here?